Navigator အဓိကအ Dream ဖက်ရှင် ကျန်းမာရေး Recipes အကြံပြုချက်များ လက္ခဏာများ 12>> Category: ရတနာ ပိုး 2014 ခုနှစ်ဖက်ရှင်အင်္ကျီ သူမ၏ဗီရိုထဲမှာအနည်းဆုံးတစ်အင်္ကျီ၏တည်ရှိမှုငွငျးပယျမယျ့သူအဲဒီမှာအနည်းဆုံးတစ်ခုကမိန်းကလေးလား?
မွေးကင်းစအတွက်ဦးနှောက်၏အဆိုပါရောင်ရမ်းခြင်း မွေးကင်းစအတွက်ဦးနှောက်၏အဆိုပါရောင်ရမ်းခြင်း, CNS များစွာသောရောဂါများမှာအလွန်ပြင်းထန်သည့်ရောဂါများ (ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်) တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ဖောမွေးကင်းစကလေးများသည်ဦးနှောက်၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဦး dislocation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရသောလူအပေါင်းတို့သည် intracranial အဆောက်အဦများ၏ volume အတိုးပွါးလာတဲ့အခါ။ ကံမကောင်းစွာနှောက်ဖော (ဥပမာ, တစ်သွေးခဲတစ်ခုသို့မဟုတ်အကျိတ်) မိမိအသှငျအပွငျမှဦးဆောင်သည့်အရာ, မကြာခဏနိုင်ငံပိုင်ထက်ပိုအန္တရာယ်ရှိသည်။ ဤအဖုအကျိတ်အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်သည်, စတ​​ဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါသည်ပေးသော intracranial ဖိအားရုတ်တရက်တိုးမြှင့်ဖို့ဦးဆောင်။ မွေးကင်းစအတွက်ဦးနှောက်၏ အဆိုပါရောင်ရမ်းခြင်း - ဖြစ်ခြင်း
အတွေးနှင့်လုပ်ဆောင်ချက် အတွေးအခေါ် - မိမိယေဘူယျ mediated ပုံစံအတွက်ဘာသာရပ်၏လူသားရဲ့သိကျွမ်းခြင်းပညာ၏လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံမပါဘဲမတည်ရှိနိုင်ပါတယ်လို့ထင်ပေမယ့်အမှုအရာ၏အနှစ်သာရကိုသို့အများကြီးနက်ရှိုင်းတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပါပဲ။ အာရုံခံစနစ်များအတှေးအချေါနှင့်လှုပ်ရှားမှုများမရအောင်နှင့်ဆက်စပ်နေသောကြောင့်, င်အဘို့, ကျွန်တော်နားလည်ခြားနားချက်ဘာကိုဖွင့်။ ငါခံစားမိနဲ့ကျွန်မ စဉ်းစား ဥပမာအားဖြင့်, သင်သစ်ပင်တပင်ကိုကြည့်ရှု: အခက်အလက်ကွေး, အခေါက်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းက၎င်း၏အရွက်၏အရောင်နှင့်ပုံသဏ္ဌာန်ကိုကြည့်ပါ။ သငျသညျရှေ့တျော၌ရိပ်မိသောသူအပေါင်းတို့, အကြောင်း, အလုပ်အတွေ့အကြုံများကို၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စိတျထဲမှာသင့်ရဲ့အာရုံခံခံစားချက်များကိုဖမ်းမိသောအရာကို၏တိကျမှန်ကန်ရုပ်ပုံလွှာကိုကြည့်ပါ။ ယခုမှာသင်ရုံသစ်ပင်တပင်မှာရှာဖွေနေမဟုတ်ပါဘူး, သင်သည်မြေဆီလွှာတိုးတက်မှုနှုန်းအပေါ်အစားအစာနှင့်အာဟာရအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဘယ်လိုစဉ်းစားအစိုဓာတ်အဖြစ်, နေရောင်ခြည်လိုအပ်သောပင်ဖြစ်၏။ ဤအမှု၌, ငါတို့အလှည့်အာရုံခံခံစားချက်များကိုမရှိ, ခံစားချက်များကိုမပါဘဲမဖြစ်နိုင်ပါသောမှတ်ဥာဏ်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်စဉ်းစားအကြောင်းပြောနေတာကြသည်။ အပြင်, အတှေးအချေါအစဉ်အမြဲယေဘူယျသည် - သင်, ဤအမှု၌မှာလူအပေါင်းတို့သည်မျက်စိမြင်သောဘုစပတ်, စဉ်းစားခြင်းနှင့်အပင်၏အသီး၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်ပါဘူး ။
အဆိုပါပြဿနာကို စဉ်းစားရန်မြင့်တက်လာပေးသည် ဒါဟာအတွေးနှင့်လူ့လှုပ်ရှားမှုများများ၏အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သတိပြုသင့်ကြောင်း, မေးခွန်းမေးအတွက်လှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုကြင်နာတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်သောအခါစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်သည်။ ဒါကြောင့်ဖွင့်ဖို့လူတွေထင်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, ဤသာအတားအဆီးကိုအားပေးနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မေးခွန်းတွေက: "ဘယ်မှာဒီကနေလာတာလဲ" "သူကဘာလဲ", "ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ" ။ ထိုအခါမေးခွန်းတစ်ခုကိုတခါပြန်စဉ်းစားတွေးခေါ်အတည်ပြုရန် - ။ ကိုကို Cognitive လှုပ်ရှားမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အတွေးအခေါ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှုပ်ရှားမှုများ လှုပ်ရှားမှုများကိုနှင့်လူ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မရအောင်ဆက်စပ်နေပါသည်ကတည်းက အဲဒါကိုအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍအကြောင်း, အလုပ်သမားဈေးကွက်အတွက်ကြောင့်ထင်ရှား၏။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတှေးအချေါတဲ့အထူးခွဲခြားပင်ရှိပါသည်: သီအိုရီ - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရည်ရွယ်သည်, ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ထောက်လှမ်း၏ဥပဒေများ;
အဘယျသို့ဆောင်းရာသီမှာအတွက်ကလပ်မှ Wear ဖို့? စတိုင်ဖက်ရှင်နှင့်အဆင်ပြေသောအဝတ် - ကလပ်မှာအောင်မြင်သောညဦးယံအချိန်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်မီတဲ့ဖက်ရှင်မိန်းမတို့သည်မိမိအတောက်ပရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်အတူကျက်သရေလူတိုင်းကြိုးစားပါ။ ဆောင်းရာသီတွင်တညဉ့်ကလပ်အဘို့, လက်ျာအဝတ်ကိုရွေးချယ်ပါ, ဒါပေမယ့်ခေတ်မီမိန်းကလေးတစ်ဦးတစ်လမ်းထွက်ရှာရန် ပို.
သင်၏လက်ကိုအတူ Tablet ကိုအဘို့ Cover ကို Tablet ကိုအဖြစ်အဆင်ပြေပြေနဲ့ဘက်စုံသုံး gadget ကဝယ်ယူပါကမကြာမီအဘယ်သူမျှမဖုံးလွှမ်းမူရင်းပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုဆုံးရှုံးမည်ကိုဆိုလိုသည်, ထိုကိရိယာဖြစ်နိုင်တက်ကြွစွာအသုံးပြုလိမ့်မည်ကြောင်းညာဘက်အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ၏သင်တန်း, သင် devaysa ကိုအထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက် store မှာဝယ်နိုင်ပေမယ့်သင့်ရဲ့လက်နှင့်အတူတက်ဘလက်များအတွက်ကိစ္စတွင်ဖြစ်စေအများကြီးစျေးသက်သာပြီးပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ Tablet ကို များအတွက်အိတ်ယူသွား
အလွယ်ကူဆုံး option ကိုသင့်ရဲ့ Tablet ကိုသင်အသုံးပြုနေတဲ့ကြသည်မဟုတ်သည့်အခါသူတို့အအချိန်လေး၌ နေ.
မည်သို့အသုံးဝင်သောငှက်ပျောသီး? မငှက်ပျော - တစ်အတော်လေးချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာကြောင်းအရသာအသီး, ဒါပေမယ့်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်နှင့်အတူလူ့ခန္ဓာကိုယ် enriches ကြောင့်သဘာဝတရား၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်သောဆုကြေးဇူးကိုမသာဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်များတွင်ဆုံးရှုံးသွားအလေးချိန်အတွက်ငှက်ပျောသီးထည့်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား?
Panthenol ဆံပင် အဲဒီမှာ Panthenol သို့မဟုတ်ကို D-Panthenol ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဆံပင်များအတွက်ကျန်းမာရေးနှင့်မကိုက်ညီသောနှင့်ဆေးဝါးအလှကုန်၏ အများစုကတံဆိပ်များ။ ဤအမှုကြောင့်ကြောင်းလှုပ်ရှားတက်ကြွသောပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ် - provitamin B5, ဆံပင်၏မျက်နှာပြင်အလွှာသို့ထိုးဖောက်ရန်နှင့်ထိုအရပ်၌အစိုဓာတ်ကိုခညျြနှောငျလေ့ရှိတယ်။ မှုကြောင့်ဒီသက်ရောက်မှုကိုမှဆံပင်ပိုမိုပျော့ပျောင်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောဖြစ်လာသည်။ Panthenol နှင့်အတူဆံပင်အဘို့ Tools များ - လွှတ်ပေးရန်ပုံစံများ: 75% ၏အာရုံစူးစိုက်မှုမှာ အရည်ကို D-Panthenol ဆံပင်။ Panthenol နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသို့မဟုတ်အပူပုံစံဆံပင်ကိုလေပေါ်မှာပ။ Panthenol နှင့်အတူ အဆိုပါမျက်နှာဖုံးသို့မဟုတ်ဆံပင်အေးစက်။ Panthenol ဆံပင်နှင့်အတူ ခေါင်းလျှော်ရည်။ ဆံပင်တောများအတွက် ဗီတာမင် - ။ Panthenol-40 ဆေးထိုးခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိ
အရည်ပုံစံဖြင့် ကို မကို D-Panthenol ဆံပင်၏ 75% တဲ့အဝါရောင် Ting နှင့်အတူရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အရည်ဖြစ်ပါတယ်။ 1% citric အက်ဆစ်နှင့်အတူ provitamin B ကိုအုပ်စုတစ်စု၏ဤ Aqueous solution ထဲမှာတော့။ မျက်နှာဖုံးများ, Shampoo &, ဗာလစံစေး: ဒါဟာလုပ်အလှကုန်တစ်ခုအပိုဆောင်း component တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ကဲ့သို့သော, Panthenol အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကုသမှုဆံပင်အဘို့မုန့်နှင့်ဦးရေပြားထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအောက်ပါဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိတယ်: ;